IHE SIM: Martin Vrijland
Kedu ihe kpatara anyị ji agba mmụọ nke izizi mbụ ahụ na ndụ afọ 7000
gbara akwụkwọ IHE SIM, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 10 February 2020	• 17 Comments
Enwere oke iju mmiri n'ọtụtụ akụkọ akụkọ ifo n'ụwa niile. N'ime okpukperechi nke ụwa a ka a na-akpọ iju mmiri na Noa bụ onye wuru ụgbọ iji jupụta ụwa mgbe iwe Chineke gasịrị n'ụdị iju mmiri. Nke ahụ n'onwe ya na-egosi na enwere otu ihe na […]
Pope Francis kpọrọ ndị isi ụwa na Vatican na 14 na Mee 2020 maka nkwekọrịta zuru ụwa ọnụ
gbara akwụkwọ IHE SIM, Nnupụ Mmebi, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 26 September 2019	• 10 Comments
Pope Francis, onye Jesuit Saint Nicholas na-enweghị mkpịsị aka ya, onye nnọchi anya Jizọs Kraịst n'ụwa, kpọkuru 2 ndị isi ụwa niile n'izuụka gara aga ka ha bịakwute Vatican na 14 na May 2020 maka 'Global Pact' (nkwekọrịta zuru ụwa ọnụ). Onwere ihe abuo di nkpa maka nzuko a ebe mmadu agha aghaghi ibia. Nke mbụ bụ […]
David Sinclair bụ prọfesọ na ngalaba mkpụrụ ndụ ihe nketa, Blavatnik Institute na onye njikwa nke Paul F. Glenn Center maka usoro ọmụmụ ihe banyere ndụ nke ịka nká na Harvard Medical School. N’ihe ngosi dị n’okpuru ebe a, ọ kọwara otú usoro ịka nká nke ahụ mmadụ si metụta ọnwụ nke ozi; yiri […]
gbara akwụkwọ IHE SIM, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 30 July 2019	• 14 Comments
Ọ bụrụ na anyị gụọ akara niile maka ihe ha bụ, mgbe ahụ anyị na-ahụ na ụwa na-agbanwe ngwa ngwa yana nwoke 2.0 bụ eziokwu n'ime ugbu a na afọ 10. Anyị ga-ahụ ụwa na ụwa 2.0 (na ọtụtụ nsụgharị ndị ọzọ) gburugburu 2045. N'ihi ya egwurugwu na-anọchi anya ebe niile [...]
Site na mkpụrụ osisi Turkish nke Rutger Hauer rue Gay Pride na mmemme Milkshake
gbara akwụkwọ IHE SIM, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 29 July 2019	• 5 Comments
A jụrụ m ụnyaahụ ma ọ bụrụ na ahụla m ihe nkiri Rutger Haer. Dị ka onye ode akwụkwọ ahụ si kwuo, ihe nkiri ndị ahụ dị egwu. Mkpụrụ Turkish n'ihi na ọ mebiri taboos nke mmekọahụ na ihe nkiri ọzọ dị mma. Ahụtụbeghị m ihe nkiri abụọ ahụ, n'ihi na enwere m ụdị obi jụrụ hypes, mana n'ezie amaara m […]
Oge eruola ịhapụ ụwa nrọ ma malite ile anya gburugburu ụwa maka ihe ọ bara uru. Nke ahụ ga-eweta mgbanwe dị mkpa ná ndụ gị. Ya mere, m ga - achọ ịkọwa ihe ngosi nke Richard Thieme (nke dị n'okpuru ala a), onye bụbu onye nchụàjà nke gbanwere onwe ya [...]
gbara akwụkwọ IHE SIM, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 20 July 2019	• 12 Comments
N'izu a, obere mkparịta ụka bilitere ebe a banyere nlọghachi azụ na ajụjụ ma ma ọ dị. Dịka nkwurịta okwu ahụ si kwuo, a ga-enwe ihe àmà zuru ezu nke ga-eme ka o doo anya na nlọghachi dị. Echere m na mkparịta ụka ahụ na-aba ụba mgbe ị na-aga na njirimara nke eziokwu anyị [...]
Ugbu a, anyị abịawo na nkwubi okwu na ọtụtụ ndị gbara anyị gburugburu bụ ndị na-adịghị ndụ (lee isiokwu a), ana m agwa gị ka ị chegharịa ọzọ banyere okwu ahụ. Ekwughị m na 'n'ikwu okwu' ma ọ bụ 'na ihe atụ', ọ bụghị ihe m pụtara. "Gaa na ịmụba" bụ nkwupụta a maara nke ọma [...]
Ọ fọrọ nke nta ka o sie ike iche, ma ọ dị mgbe ị na-eche ma ụfọdụ ndị gbara gị gburugburu nwere 'mkpụrụ obi' n'ezie? Naanị ị ga-elegharị anya gburugburu gị na ndụ kwa ụbọchị na mgbe ụfọdụ ị na-ahụ ndị nwere ike ime mmetụta ọmịiko, ma n'ezie kpam kpam [...]
Nleta ha: 2.612.752